July 2012 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ရဗ္ဗဝါမှထုတ်ပြန်သည့် ကရာချမြို့၊ အိုရန်ဂီမှ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ဥက္ကဌ အသတ်ခံရမှုသတင်း
ဆဒရ်အန်ဂျူမန် အဟ်မဒီယာ ရုံးတော်၊ ရဘ်ဝါ၊ ပါကစ္စတန်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ မြို့တော် ကရာချိ၊ အိုရန်ဂီမြို့နယ် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ နအင်းမ်အဟ်မဒ် ဂေါ်ဒဲလ် အသတ်ခံရခြင်း။ ၂၀၁၂ အတွင်း ၇ ယောက်မြောက် အသတ်ခံရမှုဖြစ်။
ချနာဘ်နဂရ်(ရဗ္ဗဝါ) - ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နံနက် အိုရန်ဂီမြို့နယ် အဟ်မဒီယာအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နအင်းမ်အဟ်မဒ်အား သေနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မစ္စတာနအင်းမ်အဟ်မဒ်သည် နံနက် အိမ်မှရုံးသို့သွားရန်အထွက်မှာပင် အမည်မသိ ဆိုက်ကယ်သမားနှစ်ဦးက သူ့အား ဟန့်တားလျက် ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နေရာမှာပင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ သူသည် အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်ကပင် အိုရန်ဂီမြို့နယ်၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လာသူ ဖြစ်သည်။ မစ္စတာနအင်းမ်အဟ်မဒ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော် အစိုးရဘဏ်၏ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ပြီး ဒေသ၌ နာမည်ကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားသူ၊ မည်သူနှင့်မှ ရန်ငြိုးမရှိသူ ဖြစ်၏။ ဖော်ပြရန်လိုအပ်သောအချက်မှာ အိုရန်ဂီမြို့နယ်တွင် ဤဖြစ်စဉ်မတိုင်မီ ကာလအနည်းငယ်ခန့်က အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမုန်းတရားကြီးထွားစေသည့် နံရံကပ်စာများ အနှံ့အပြားကပ်၍ လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။
ဇနီးသည် ကျန်ရစ်ပြီး ကွယ်လွန်သူ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ရဘ်ဝါသို့ သယ်ယူမြှုပ်နှံသွားမည် ဖြစ်သည်။ အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာစလီးမ်မွတ်ဒီးန်က ဤဖြစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလွန်ဝမ်းနည်း ကြေကွဲခြင်း ဖြစ်ရကြောင်းနှင့် ဤလုပ်ရပ်အား အပြင်းအထန် ရှုံ့ချကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍ သူက 'ဒါဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ရ ဦးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဟ်မဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့် အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဟ်မဒီများကို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ ကရာချိမြို့တစ်ခုတည်း အတိုင်းအတာအရ ဒါဟာ ၁၁ ဦးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ အစမှာတင် အဲဟ်စာန်ကမာလ် ဆိုသူကို မန်ဇူးရ်ကိုလိုနီအရပ်မှာ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအရင်မတိုင်မီ ကာလအနည်းငယ်ကလည်း ကရာချီမြို့နေ မစ္စတာ မိုဟမ္မဒ်အတ်စ်လမ် ဘတ်တီဆိုသူကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာကြောင့် ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရသွားပါတယ်။' ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက ပြောကြားရာမှာ 'ဒီစိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေကြောင့် အဟ်မဒီတွေအဖို့ လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ပင် မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အထိပါပဲ။'
'ဒီလို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အဟ်မဒီယာအဖွဲ့နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမုန်းတရားနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ လှုံ့ဆော်မှုများကို တားမြစ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါတဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင်တွေကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။'
ပါကစ္စတန်၊ ကရာချိ : အိုရန်ဂီမြို့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ ၂၀၁၂
သတင်း - အိမ်ရားန်ဂျတာလာ၊ Ahmadiyyatimes
source: @BalalHaider @SaiNiz @AtifAhmadS @Al_Ufaq
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်ဆိုသူများ၏ အကြမ်းဖက်ဝါဒလှုံဆော်မှုများပါ စာတမ်းများ၊ လက်ကမ်းစာ စောင်များသာမက နံရံများ၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားများတွင် လက်လွတ်စပယ်ရေးသားထား သော အမုန်းတ ရားကြီးထွားစေသည့် စာသားများကြောင့် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များမှာ အကြမ်းဖက်လူသတ်ကောင်၊ မွတ်စလင်မ်ဆိုသူများ၏ ပစ်မှတ်များဖြစ်နေကြရပေသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကရာချိရှိ အိုရန်ဂီမြို့၊ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမှာ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ၎င်း၏နေအိမ်ရှေ့၌ပင် သေနတ်ဖြင့်အကြမ်းဖက်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်းအရ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ နယ်မြေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမှာ အနီးကပ်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးခေါင်းဒဏ်ရာအရ သိရှိရသည်။
ထိုသတင်းအား အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ ဆလီးမ်မုဒီးန်က အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသူမှာ အိုရန်ဂီမြို့မှ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ၊ မစ္စတာနအီးမ်အဟ်မဒ် ဂေါ်ဒဲလ်ဖြစ်ပြီး အသက် ၅၂ နှစ်ရှိကာ ဇနီးသည်ကျန်ရစ်သည်။
ထို့ပြင် မစ္စတာဂေါ်ဒဲလ်မှာ အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ကာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘဏ်တွင် လက် ထောက်ဒါရိုက်တာရာထူး ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ပါကစ္စတန်တွင် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များမှာ အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်မ်ဆိုသူများ၏ လွယ်ကူသည့် ပစ်မှတ်များဖြစ်နေသည်သာမက သာသနာရေးဆိုင်ရာ အမုန်းတီးခံများအနေဖြင့် သူတို့၏ လွတ်လပ် ခွင့်နှင့် လူသားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကိုပါ နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်၏ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ် ခြင်းကို ခံနေကြရသည်။
ထို့ပြင် မစ္စတာဆလီးမ်မုဒ္ဒီးန်က ဤသည့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ အမုန်းတရားကြီးထွားစေမည့် အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်မ်များ၏ ဝါဒဖြန့်ချိမှုများကြောင့်ဟု ထင်ရကြောင်း၊ အန္တီအဟ်မဒီ မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်များ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လမ်းကြိုလမ်းကြားအုတ်နံရံများ ၌ရေးသားထားသည့် အန္တီအဟ်မဒီမှတ်ချက်များကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြ ပြောဆိုသည်။
"ဒါအဖြစ်အပျက်က ကရာချိမှာ ၆ လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲ အခြားအဟ်မဒီတစ်ဦးကို ဒီလိုပဲလုပ်ကြံ ခဲ့ကြပါသေးတယ်။" ဟု မစ္စတာဆလီးမ်က ပြောဆိုသည်။
၆၅နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့နှင့် မြန်မာပြည်ရှိ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍ
၁၉ ဇူလိုင် ကျရောက်ပြန်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီအချိန်အခါကတော့ ဇူလိုင် ၁၉ ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အရေးပါမှုကို ထုတ် ဖော် ပြသကြရမယ့်အချိန်ပါပဲ။
ဒီနေ့အခါသမယကတော့ မြန်မာ့မြေပေါ်က အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက်ပိုပြီး အရေးပါနေ သလို အခြားနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမများကလည်း မြန်မာ ပြည်ဖွား မွတ်စလင်မ်များကို သူတို့ရဲ့သာသနာအပေါ်မှာ လုံး၀ဥဿုံပျပ်ဝပ်ထားရင်းနဲ့မှ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ကို ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသမလဲ၊ ဘယ်လိုရပ်တည်ပြမလဲဆိုတာ တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စောင့်ကြည့်ကောင်း စောင့်ကြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်ကတော့ ဒီလိုပါ။ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးတစ်ယောက်က မိမိရဲ့ တပြည်တည်း သားချင်းကို ရန်ဘက်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမွတ်စလင်မ်က အစ္စလာမ့်အရင်းခံ သွန်သင်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူပါ။ အစ္စလာမ့်တမန်တော်ကြီး မုဟမ္မဒ် (သခင့်အပေါ်သို့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း သန္တိ သုခအဖြာဖြာ ကျရောက်ပါစေ)က အသင်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ ချစ်တဲ့စိတ် (မျိုးချစ်စိတ်) ဟာ (သာသနာအပေါ်) သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အလွန်တရာ လှပသိမ် မွေ့စွာ သွန်သင်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်က မွတ်စလင်မ်များကို မိမိတို့အထက်က အုပ်ချုပ်သူများအား နာခံဖို့ အခု လို သွန်သင်ထားပါတယ်။
"အို-သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို လိုက်နာကြလေကုန်၊ ထိုနည်းတူစွာ အသင်တို့သည် ရစူလ်တမန်တော်၏ အမိန့်တော်များကို လည်းကောင်း၊ မိမိတို့အနက်မှအာဏာပိုင်များ၏အမိန့်ကိုလည်းကောင်း၊ လိုက်နာကြလေကုန်။"
(အလ်ကုရ်အာန် ၄.၅၉၊ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များသည် ဗိစ္စမိလ်လာဟ်ကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက် သဖြင့် အဟ်မဒီများ၏မူအရ ၄.၆၀)
တဖန် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်က အခုလို သွန်သင်ထားပြန်ပါတယ်။
"ငါ့အားနာခံသူဟာ ဘုရားရှင်ကို နာခံသူဖြစ်တယ်။ ငါ့ကို မနာခံသူကတော့ ဘုရားရှင်ကို မနာခံသူဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမဆို မိမိအထက်က အုပ်ချုပ်သူကို နာခံမယ်ဆိုရင် ငါ့ကို နာခံတာနဲ့ သဏ္ဌာန်တူဖြစ်တယ်။ မိမိအထက်က အုပ်ချုပ်သူကို မနာခံသူကတော့ ငါ့ကို မနာခံတာနဲ့ သဏ္ဌာန်တူပဲ ဖြစ်တယ်။" (မွတ်စလင်မ်ကျမ်း၊ ကိတာဗ်အလ် အိမာရာဟ်)
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများကို နာခံဖို့နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ထားရှိကြဖို့ကို ကုရ်အာန်ကျမ်း တော်နဲ့ တမန်တော်ကြီး မုဟမ္မဒ်တို့က ရှင်းလင်းစွာ သွန်သင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိမိတို့ရဲ့ မွေးရပ်မြေနိုင်ငံတော်အပေါ်သာမက အမျိုးသားချင်းများအပေါ်မှာပါ သစ္စာမဖောက်ဖျက်စတမ်း ထားရှိရမယ့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက် ကတော့ လက်တွေ့ကျသလို မင်းမဲ့စရိုက်တွေနဲ့ သူပုန်ထမှုတွေကိုပါ အမြစ်ကနေ တွန်းလှန်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်က ယူနီဗာဆယ်ဖြစ်သလို မွတ်စလင်မ်တွေအားလုံးကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ဘ၀ကျောင်းလမ်းစေဖို့ ဆင့်ဆိုပါတယ်။ ဒီသွန်သင်ချက်က မွတ်စလင်မ်တွေကို ဘယ်သောအခါမှ သစ္စာစောင့်သိရိုသေမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်စေဖို့ရာ လမ်းညွှန်ထားတာမျိုးမရှိပါ။ ဒါကြောင့် လည်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကျိုးပမ်းမှုသမိုင်းမှာ အစ္စလာမ်သာသနာကို မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်သက် ဝင်ထားကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အမြောက်အမြားကို တွေ့ရမှာဖြစ်သလို အာဇာနည်ကြီးများစာရင်းမှာ လည်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်များကိုယ်စားပြု ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ကို တွေ့ကြရ မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ယနေ့မွတ်စလင်မ်များအပေါ်မှာ ဘာသာခြားများကထင်မြင်နေတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆ အချို့အား အချို့မွတ်စလင်မ်ဆိုသူတွေကိုယ်တိုင်က လက်ခံကျင့်သုံးနေကြတာကို ဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့ မြင်နေကြရပါတယ်။ ဥပမာ - ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်းကို မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ ဝင်ခွင့် ရှိပါသလား။ မက္ကာဟ်နှင့် မဒီနာကို မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူများ ဝင်ခွင့်ရှိပါသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပါ။
အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အစ္စလာမ့်သွန်ချက်ကို အခြေပြုပြီး ဖြေကြားပေးနိုင်တဲ့ အထက် ပါမေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေကတော့ ဟုတ်ကဲ့၊ ဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ ဝင်ခွင့်ရှိခြင်းကလည်း အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရသာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အရ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ အခြားသူတစ်ဦးကို ဗလီအတွင်းဝင်ရောက် ခြင်းမှ မတားဆီးထားနိုင်သလို ကျမ်းစာဥပဒေအရတားဆီးထားခြင်း လည်းမရှိပါ။ သို့သော် ၀င်ရောက်မယ့် လူက အန္တရာယ်ပြုနိုင်သူ၊ မပြုနိုင်သူဆိုတဲ့ ချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်။
ဗလီဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အိမ်တော်ဖြစ်တာကြောင့် လူအားလုံး ၀တ်ပြုဆုတောင်းသင့်တဲ့၊ ၀တ်ပြုဆု တောင်းနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ ဘယ်သူမဆို ၀င်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗလီအတွင်းမှာ ရုပ်တုဆင်းတုကိုတော့တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဗလီအတွင်းမှာ ဆင်းတုရုပ် တုကို တားမြစ်ရခြင်းက ကာဘာကျောင်းတော်(မက္ကာမြို့ရှိ)ကို အကာအကွယ်ပြုဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာတော့ ဗလီကျောင်းအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီလိုအားဖြင့် ဘုရားရှင်တစ်ပါး တည်းကို ယုံကြည်ကြသူများအတွက် မြင့်မြတ်တဲ့နေရာဌာနအဖြစ် တည်တံ့နေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ့်သွန်သင်ချက်အရ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများလည်း မက္ကာနဲ့ မဒီနာရှိ မြင့်မြတ်သော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များအတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
တမန်တော်မြတ် မုဟမ္မဒ်လက်ထက်တော်က နာဂျ်ရန်မြို့မှ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်တော် မြတ်ကို လာရောက်တွေ့ဆုံကြတော့ ကိုယ်တော်မြတ်က ထိုခေါင်းဆောင်များကို မဒီနာမြို့ရှိ မိမိရဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းအတွင်း တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြင့်တွေ့ဆုံနေကြစဉ်မှာ ခရစ်ယာန် ခေါင်းဆောင်များက ဗလီထဲကထွက်ပြီး ဘုရားဝတ်တက်ဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့အခါ ကိုယ်တော်မြတ်က ဗလီဝတ်ကျောင်းဆိုတာ ဘုရားရှင်ရဲ့ အိမ်တော်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူမဆို မိမိတို့ရဲ့ ဘုရားဝတ် တက်မှုများကို ဖြည့်ဆီးဖို့ ဗလီအတွင်းမှာပဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့တာကြောင့် ထိုသူများကလည်း ဗလီအတွင်းမှာပဲ ဘုရားဝတ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ (အိဗ်နေဟီရှမ်၊ အတွဲ ၁၊ စာ – ၅၇၅-၅၇၇)
အိဗ်နေဟီရှမ်ဆိုတာ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ရဲ့ အထုပ္ပတ္တိကို ရေးထားတဲ့ အီဂျစ်ပြည်ထုတ် မှတ်တမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝီကီပီဒီယမှတ်တမ်းကတော့ ဒီလိုဖော်ပြပါတယ်။
In the tenth year of the Hijrah,adelegation of fourteen Christian Chiefs from Najran; among them Abdul Masih of Bani Kinda, their chief, and Abdul Harith, bishop of Bani Harith, came to Medina to makeatreaty with the Islamic prophet Muhammad, and were permitted by him to pray in his mosque, which they did turning towards the east.
" ဟစ်ဂျရီ ၁၀ ခုနှစ်တွင်၊ နာဂ်ျရန်မြို့မှ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် ၁၄ ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့ကို ဘနီကင် ဒါမျိုးနွယ်ဝင် အဗုလ် မဆီဟ်ဆိုသူနှင့် ဘနီဟရိသ်မျိုးနွယ်မှ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး အဗုလ် ဟရိသ် ဆိုသူတို့ခေါင်းဆောင်လျက် မဒီနာမြို့သို့ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်တွင် ထိုသူတို့အား (မဒီနာမြို့တွင်းသို့ ပေးဝင်ခဲ့သည်သာမက) တမန်တော် မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင် သူတို့ကို ဗလီဝတ်ကျောင်းအတွင်း ဘုရားဝတ်ပြုခွင့် ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုဗလီဝတ် ကျောင်းတော်အတွင်းတွင် သူတို့က အရှေ့ဘက်သို့ မျက်နှာမူကာ (ဘုရားဝတ်တက်ခဲ့ကြလေသည်။) "
ဒါကြောင့် စစ်မှန်တဲ့သွန်သင်ချက်နဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို ကြည့်ပြီး မွတ်စလင်မ်များအား မှတ်ချက်တစုံတရာပေးနိုင်ကြဖို့နဲ့ မွတ်စလင်မ်များအနေနဲ့လည်း စစ်မှန်တဲ့သွန်သင်ချက် ဓလေ့များ ကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြဖို့ရာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ သို့မှသာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာ မွတ်စလင်မ်ကြီး ဦးရာဇတ်လျောက်လှမ်းခဲ့သောလမ်းမျိုးကို သမိုင်းစာမျက်နှာထက်တွင် ကြိမ်ဖန်များ စွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရသလို ထပ်မံမြင်တွေ့နေကြရဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁) PATRIOTISM AND LOYALTY TO THE NATION - THE ISLAMIC PERSPECTIVE
၂) Q10: Are non-Muslims allowed inside mosques?
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်၊ အစ္စလာမ့်ခလီဖာမှ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ ယနေ့ကမ္ဘာ့အခြေအနေ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေးပို့ခဲ့သော စာများ (၂)
ကမ္ဘာကြီးတွင် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော ပဋိပက္ခအခြေအနေများကြောင့် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ် အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်း ဆောင် အစ္စလာမ့်ခလီဖာ၊ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်မှ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များထံ စာများပေးပို့ သတိပေးခဲ့ရာ ထိုစာ များထဲမှ အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မ ရွန်းထံ ပေးပို့ခဲ့သော စာ၏မြန်မာပြန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၊ ၂၀၁၂
ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သော Rt. Hon. ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း
၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်း၊ လန်ဒန်
ချစ်ခင်ရပါသော ဝန်ကြီးချုပ် -
ယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးဖြတ်သန်းနေရသော အန္တရာယ်များပြည့်နှက်နေပြီး လုံခြုံမှုကင်းသည့် အခြေ အ နေများ၏ မီးမောင်းထိုးပြမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် လူကြီးမင်းထံ စာရေးသားရန် လိုအပ် ကြောင်း ခံစားမိ ခဲ့ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံတော်၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ် ၍ နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ် အရေးကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ချမှတ် ရန်လူကြီးမင်းထံတွင် အခွင့်အာဏာရှိနေ၏။ (ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များကား) ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံး ကျယ်ပြောလောက်အောင် လည်း (အကျိုးသက် ရောက်စေနိုင်ပါသည်။) ကမ္ဘာတခွင်တပြင်လုံး၌ စစ်ငွေ့စစ်ရိပ်များ ပြိုးပျက်လျက်ရှိ နေသဖြင့် ယနေ့ကမ္ဘာ ကြီးသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအား စိုးရိမ်ထိတ် လန့်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။ တိုင်းပြည်နိုင်ငံများအကြား ဖြစ်ပွားနေ သော သေးငယ်လှသည့် မပြေလည်မှုများမှသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်ကြီးအဖြစ် ပေါက်ကွဲ ထွက်လာဖို့ ခြိမ်းခြောက်နေ၏။ ယနေ့ကမ္ဘာ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေးတို့၏ အခြေအနေမှာ ၁၉၃၂ ခုနှစ်က အခြေအနေအတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ လေ့လာ သုံးသပ်ရပေသည်။ ထို့ပြင် ပြိုင်မျဉ်း နှစ်ကြောင်း ကဲ့သို့ တူညီနေမှုများစွာလည်း ရှိနေရာ ထိုကိစ္စရပ်များ ပေါင်းစုံ စုဝေးသွားပါက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအဖြစ် ပေါက်ကွဲထွက်လာသော သဏ္ဌာန်အတိုင်း ဖြစ်နေ ကြောင်း ယနေ့ကမ္ဘာ့ပုံရိပ်က သက်သေပြုနေပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာများက အမှန်တကယ် လောင်ကျွမ်း လာခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် တတိယကမ္ဘာစစ်တည်းဟူသော ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ် ဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ရပါမည်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးငယ်အသွယ်သွယ်တို့မှာ နူးကလီးယားလက်နက်များ ပိုင်ဆိုင် နေကြသ ဖြင့် ထိုတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ နူးကလီးယားစစ်ပွဲကြီးပင် ဖြစ်လိမ့်မည့်အကြောင်း သံသယပွားဖွယ် မရှိပါ။ ယနေ့လက်နက် များသည် အဖျက်စွမ်းအား အလွန်ြကီးမားသဖြင့် မျိုးဆက်တဆက်ပြီး တဆက် မွေးဖွားလာမည့်ကလေး များအတွက် မျိုးရိုးဗီဇနှင့် ရုပ်ခန္ဓာချို့ယွင်းမှုများ ခံစားရနိုင်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ သည် စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ နူးကလီးယား စစ်ပွဲဒဏ်ကို ခံစားရဖူးသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်၌ နူးကလီးယားဗုံး ဒဏ်ကြောင့် မြို့ကြီးနှစ်မြို့ တိပ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သော ကျယ်ပြောလှသည့် ကြောက်လန့်ဖွယ်ဖြစ်စဉ်များမှာ နူးကလီးယားဗုံးများ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ထိုဗုံးများ၏ စွမ်းရည်သတ္တိမှာ ယနေ့အချို့နိုင်ငံငယ်ကလေးများကပင် ပိုင်ဆိုင်ထား သည့် နူးကလီးယား လက်နက်များ ၏ စွမ်းရည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ နိမ့်ကျပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ များက စားပွဲ ဝိုင်းထိုင်ကာ ထိုကပ် ဆိုးကြီးမှ ကမ္ဘာ့လူထုကို ကယ်တင်ဖို့ အဖြေတစ်ခုအား ရှာဖွေရန် တာဝန်တင်ရှိနေ ပါသည်။
အထူးထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ နိုင်ငံငယ်ကလေးများရှိ နူးကလီးယားလက်နက်များသည် အကျိုး ဆက်ကို မငဲ့ကွက်၊ ငဲ့ကွက်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိသည့် လက်နက်ကျူးနေကြသော သူများလက် တွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားမည့်အရေးပင်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံများက တရားမျှတမှုကိုမကျင့်သုံး၊ နိုင်ငံငယ် များ၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်အခြေအနေများကို မဖယ်ရှားပေး၊ ကြီးမြင့်ပြီး အမြော်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသည့် ပေါ်လစီများ ကို မကျင့်သုံးပါမူ အခြေအနေသည် ထိမ်းချုပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဆီသို့ တစိုက်မတ်မတ်ရွေ့ လျောကာ ထိုသည့် နောက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အပျက်အဆီးများကား ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်၊ စိတ်ကူး စိတ်သန်းထဲတွင်ပင် မြင်နိုင်စွမ်းမည်မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူများစုဖြစ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုး သူများသည်လည်း ထိုစိတ် ပျက်ဖွယ် အန္တရာယ်ကြောင့် အကျိုးဆက်ကို တပေါင်းတပါတည်း ခံစားရနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရကား၊ လူကြီးမင်းနှင့် အခြားသော ထိပ်သီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ထိုသည့် ကြောက်မက် ဖွယ် အခြေအနေ၏ အမှန်တကယ်ဖြစ်တည်လာမည့်အရေးကို နားလည်သဘောပေါက် ကာ လူကြီးမင်း တို့၏ ရည်ရွယ်ယာထားချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် ရန်လိုသည့် သဘောထား များနှင့် အင်အားသုံး ဖြေရှင်း မှုများအစား တရားမျှတမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသည်သာမက လုံခြုံမှုကိုပါ ပေးသည့် ပေါ်လစီများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဤသည် ကျွန်ုပ်၏ ပြင်းပျ သောခံစားချက်နှင့် ဆုတောင်း ပတ္ထနာဖြစ်သည်။
အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ပါမူ ဗြိတိန်အနေဖြင့် နိုင်ငံပေါင်းများစွာကို အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့် ပါကစ္စတန်တို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် တရားမျှတမှု၏ စံပုံစံနှင့် သာသနာရေး လွတ်လပ်ခွင့်များကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ပေသည်။ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အသင်းကြီးအား လက်မွန်မဆွ တည်ထောင်အုတ်မြစ်ချခဲ့သူ အရှင်သူမြတ်က ဘုရင်မကြီး ဗစ်တိုးရီးယားအား သူမ၏ စိန်ရတုသဘင် အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာနှင့် အစ္စလာမ့်သတင်းစကားကို ပေးပို့ခဲ့ရာတွင် သခင်ကြီး အနေ ဖြင့် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ တရားမျှတညီမျှစွာ အုပ်စိုးမှုအတွက် ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးမှ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ဆုလာဘ်များ ချီးမြှင့်ပါစေကြောင်းကို အထူးအလေးထား ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါ သည်။ သခင်ကြီးက ဗြိတိသျှ အစိုးရအား တရားမျှတမှုနှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့အတွက် အထူးချီးကျူးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ကမ္ဘာ တွင်မူ ဗြိတိသျှအစိုးရက ထိုတိုက်ငယ်ကို အစိုးရအုပ်ချုပ်မှု မရှိတော့သော်လည်း ဘာသာရေး လွတ်လပ် ခွင့်နည်းနာများကမူ ဗြိတိသျှတို့၏ အသိုင်းအဝန်းနှင့် ဥပဒေများထဲတွင် နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ် လျက် ရှိနေပါသည်။ ထိုဥပဒေမှ လူသားတိုင်း သာတူညီ မျှဖြစ်ရေးနှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တို့ကို ပြဌာန်း ပေးပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘက်နံပါတ် ၂ ၏ စိန်ရတုသဘင် စီရင်ကျင်းပခြင်းလည်း ရှိနေပေရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် တရားမျှတမှု၏စံပုံစံနှင့် ရိုးသားမှုတို့အား ပြသဖို့ရာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗြိတိန်က ထိုသည့်တရားမျှတမှုအား ထုတ်ဖော်ပြသည့်အခါတိုင်း အဟ်မဒီယာမွတ်စ လင်မ်အသင်းအဖွဲ့က အမြဲတစေအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်ချည်းဖြစ်ကြောင်း အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ် တို့၏သမိုင်းက လျစ်ဟပြသလျက်ရှိပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနယ်ပယ် တွင်သာမက လူကြီးမင်းတို့နိုင်ငံတော်၏ ကောင်းမွန်လှသော အတိတ်သမိုင်းကို (လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့်) မည်သည့်အခါမှမမေ့မလျော့ဘဲ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာအနှံ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးကို အစပြုနိုင်သည့်နယ်ပယ်တိုင်းတွင်လည်း တရားမျှတနေမည်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ဝိသေသ ဖြစ် နေဦးမည့် အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ မြော်လင့်ပါသည်။
မည်သည့်အဆင့်၊ မည်သည့်ဦးတည်ချက်တွင်ရှိနေစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အမုန်းတရားများ၏ အငွေ့အသက်များအား ပယ်ရှားပစ်ဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်အနေ ဖြင့် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှသာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရောက်ရှိလာ မည့် မျိုးဆက်များအတွက် လှပသည့်အနာဂတ်အား သေချာရေရာစေပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ် တို့ ထိုသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ၌ ကျရှုံးခဲ့ပါသော် ရလဒ်မှာ နူးကလီးယားစစ်ပွဲပင်ဖြစ်လိမ့်မည့် အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်းဝယ် သံသယဖြစ်စရာပင်မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်မျိုး ဆက်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြုအမူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထိုကြောက်စရာကောင်းသည့် ဆိုးကျိုးကို နေရာတိုင်း တွင်ခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်ကာ သူတို့၏ ရှေးကျသော အကြီးအကဲများက ကမ္ဘာကြီးအား ကပ်ဆိုးကြီးထဲသို့ ခေါ်ယူသွားခဲ့သည့်အဖြစ်အား ဘယ်သောအခါမှ ခွင့်လွှတ်နိုင်လိမ့် မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထပ်မံ၍လူကြီး မင်းအား သတိပေးလိုသည်မှာ ဗြိတိန်သည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ သာမက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပေါ်တွင်ပါ ဩဇာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ လူကြီး မင်းအနေဖြင့် အလိုရှိပါမူ ဤကမ္ဘာကြီးအား တရားမျှ တမှုနှင့် သာတူညီမျှရှိစေရေး လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆီးကာ လမ်းညွှန်နိုင်ပါသည်။ သို့ကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် အခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံ များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့ကိုယ် ပိုင်တာ ဝန်များကို ထမ်းရွက်သင့်ပါ သည်။ အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် ဘုရားသခင်က အသင်နှင့် အခြားကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်များကို ဤသတင်းစကားအား နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ စွမ်းအားချီးမြှင့်ပါစေ။
တောင်းဆုများနှင့် ဆန္ဒမွန်ဖြင့် -
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အသင်းအဖွဲ့ကြီး၏ ခေါင်းဆောင်
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်၊ အစ္စလာမ့်ခလီဖာမှ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ ယနေ့ကမ္ဘာ့အခြေအနေ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေးပို့ခဲ့သော စာများ (၁)
ကမ္ဘာကြီးတွင် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော ပဋိပက္ခအခြေအနေများကြောင့် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်း ဆောင် အစ္စလာမ့်ခလီဖာ၊ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်မှ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ စာများပေးပို့ သတိပေးခဲ့ရာ ထိုစာ များထဲမှ အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမားထံ ပေးပို့သော စာ၏ မြန်မာပြန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မတ်လ ၈ ရက် ၊ ၂၀၁၂
ကမ္ဘာပေါ်၌ ဖြစ်ပျက်နေသော မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် လူကြီးမင်းထံ စာရေးသားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်ခံစား မိခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတတစ်ဦး အနေဖြင့် လူကြီးမင်း ၏ အခွင့်အာဏာဖြင့်ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ လူကြီးမင်း၏တိုင်းပြည်ကို သာမက ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။
တည်ငြိမ်မှုကင်းပြီး ဆူပူသောင်းကျန်းမှုများက ယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးတွင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိသည်။ အချို့သော နေရာများ၌ အရွယ် အစားသေးငယ်သော စစ်ပွဲများလည်း ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါပြီ။ ထိုဆူပူ သောင်းကျန်း မတည်ငြိမ်မှု များ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော နေရာဒေသ များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အင်အားစိုက် ထုတ်ကြိုးပမ်းမှုမှာ မျှော်မှန်းထားသလောက် အကြောင်းမ လှခဲ့ပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အားလုံးလိုလိုက အခြား နိုင်ငံများ(မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့်နိုင်ငံများ) ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်သို့ မဟုတ်ကန့်ကွက်ရန်စသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါဝင်ကြကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း တရားမျှတမှုလိုအပ် ချက်ကိုမူ ဖြည့်ဆီးနေကြသည်မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာလောကကြီး၏ လက်ရှိအဖြစ်အပျက်များကို ယခုပင်ရှုမှတ်စိစစ်ကြည့်ပါက ကမ္ဘာစစ်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ အမြစ်တွယ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သံဝေဂရဖွယ် တွေ့ရှိရပါမည်။ နိုင်ငံကြီးငယ်မဟူတွင် နူးကလီးယား လက်နက်များပိုင် ဆိုင်နေသည်သာမက နိုင်ငံအချင်းချင်း မကောင်းကြံဆည်မှုများနှင့် မိတ်သင်္ဂဟ ပျက်ပြားစေမည့် တင်းမာမှုများသည်လည်း တိုးပွား လျက်သာ ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေဆိုးကြီးကြောင့် တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်၌ ဖြစ်လုဆဲဆဲ ရှိနေပါပြီ။ ထိုသည့် တတိယကမ္ဘာစစ်မှာကား မလွဲဧကန် နူးကလီးယားစစ်ပွဲကြီးဖြစ်မည်သာ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မှာ ကမ္ဘာလောက ကြီးသည် ကြောက်မက် ဖွယ်အဖျက်စွမ်းအားကြီးဆီသို့ ဦးတည်နေကြောင်း မျက်မြင်ဒိဌိ မြင်တွေ့နေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးတွင် သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါမူ ယခုကဲ့သို့ တတိယကမ္ဘာစစ် ၏ အငွေ့အသက်များ ဖုန်းလွှမ်းလာခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၁၉၃၂တွင် စတင်သည့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းများ နှင့် နိုင်ငံများအကြား ပေါင်းစည်းမှုပြိုကွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ထိပ်သီးစီးပွားရေး (လုပ်ငန်းများ၏) အခြေအနေမှာ ၁၉၃၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သည့် အကြပ်အတည်းများနှင့် ပြိုင်မျဉ်းများသဖွယ် ထပ်တူကျလျက် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးပြဿနာ များကြောင့် နိုင်ငံ ငယ်များအကြား စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှုမှတ်စိစစ်ကြည့်နိုင်သလို ထိုနိုင်ငံများအတွင်း၌ ဘုံသဘောတူညီမှု ကင်းပြီး မကျေနပ်ချက်များမှာ စထက်တပိုး တိုးပွားမြင့်တက် လာနေပါသည်။ ထိုမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့များအတွင်း အင်အားအချို့ ထွက်ပေါ် လာကာ ထိုအင်အားမှ ကျွနု်ပ်တို့အား ကမ္ဘာစစ်ဆီဦးဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံငယ်များ၏ ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေး နှင့် သံတမန်နည်းများဖြင့် မဖြေရှင်းနိုင်ပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဥပဒေပြုနိုင်ကြသူများထဲ၌ အုပ်စုခွဲများ သာမက အခြားအုပ်စုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုသည် တတိယကမ္ဘာစစ်အဖြစ် ပေါက်ကွဲထွက်လာမည့် ရှေ့ပြေးပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာလောကတိုးတက်ရေးကို အာရုံစိုက်ရမည့်အစား ကမ္ဘာကြီးအား ဤသည့်အဖျက်စွမ်းအားမှ ကယ်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်အား များ အချိန်မှီတိုးမြှင့်ကြဖို့ မရှိ မဖြစ်၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ လူသားထုကြီးတစ်ရပ်လုံး အသက်ရှင်ကျန် ရစ် နေဖို့အတွက် အာမခံချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည့် ကျွနု်ပ်တို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်၊ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားရှင်အား လူသားထုကြီး တစ်ရပ်လုံးက သိရှိနားလည်လာနိုင်ဖို့ အပူတပြင်း လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကမ္ဘာကြီးသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိဖျက်ဆီး မည့်လမ်းကြောင်းဆီသို့ အလျင်အမြန်ပင် ဆက်လက်လျောက်လှမ်း သွားပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအပါအဝင်၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ အခြားနိုင်ငံများအား အင်အားကို အသုံး ပြုပြီး အကျဉ်းအကြပ်ထဲတွန်းပို့သည်ထက် သံခင်းတမန်ခင်းနည်းများ၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနှင့် အမြော်အမြင်တို့ကို အသုံးချသင့်ပါ သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံအနေ ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစတင်နိုင်ဖို့ရာ မိမိ၏အခန်းကဏ္ဍကို ထမ်းရွက်သင့်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေ ဖြင့် အခြားနိုင်ငံငယ်များ၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံအတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ညီညွတ်မျှ တ သဟဇာတဖြစ်နေခြင်းအား အနှောက်အယှက်ပေးခြင်းမျိုးဖြင့် ထွက်ပေါက်မယူသင့်ပါ။ ယခုအချိန်၌ အမေရိကန်အပါအဝင် အင်အားကြီး နိုင်ငံများကသာ နူးကလီးယားစွမ်းအင်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်မဟုတ်မူဘဲ အသေအချာ စဉ်းစားဆင်ခြင် ခြင်းကင်းပြီး မကြာခဏလက်နက်ကျူးသည့် အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်များရှိနေသော အခြားနိုင်ငံငယ်များ ကလည်း အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသည့် လက်နက်များကို ပိုင်ဆိုင်နေကြသည်။ သို့ဖြစ်ရကား တတိယကမ္ဘာစစ် သို့ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည့် အဓိကရော၊ သာမညစွမ်းအင်များ ကိုပါမကျန် အစွမ်းကုန်တားမြစ်ဖို့ရာ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် အင်ပြည့်အားပြည့်ကြိုးစားပါရန် အနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါမူ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ထိုစစ်ပွဲကြီးမှာ အာရှ၊ ဥရောပနှင့် အမေရိက တို့ရှိ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကိုသာ ရိုက်ခတ်လိမ့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်များမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပြုမူလိုက်သော အပြုအမူများ၏ ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာ ဆိုးကျိုးကို ခံစားရပါမည်။ ထိုမျှသာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့ပြီး ပုံစံမကျဖြစ်နေသည့် ကလေးများ မွေးဖွားလာပါလိမ့်မည်။ ထိုကလေးများကား သူတို့၏ရှေ့ဆောင် ဘိုးဘွားဘီဘင်များကို ကမ္ဘာလောကကြီးအား ထိုသည့်ကြမ္မာဆိုးကြီးထဲ သို့ ဆွဲခေါ်ယူသွားခဲ့မှုအတွက် မည်သည့်အခါမှ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂလိက အရေးများကို အာရုံစိုက်နေမည့်အစား ကျွနု်ပ်တို့သည် နောင်လာနောက်သားများအတွက် စဉ်စားပေးသင့်ပြီး သူတို့၏အနာဂတ် တောက်ပဖို့ရာ အထူးအင်အားစိုက်ထုတ်သင့်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအပါအဝင် ကမ္ဘာ့ခေါင်း ဆောင်များအား တန်ခိုးတော်ရှင် ဘုရားသခင်က ဤသည့်သတင်းစကားကို နားလည်သိမြင်နိုင်စွမ်း ပေးသနား ပါစေ။
ပဉ္စမမြောက် ခလီဖတွလ် မဆီဟ်
အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားများအတွက် ဖျောင်းဖျပြောဆိုနိုင်သည့် သတင်းစကားပိုင်ရှင် အစ္စလာမ့် အဖွဲ့အစည်း။ သို့သော် (သူတို့အတွက်) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရန်သူများလည်း ရှိ
July 08, 2012 admin No comments
ဇူလိုင်လ ၇ ရက် ၂၀၁၂ (စနေနေ့) အတွက်စီအင်အင် မျက်နှာဖုံးသတင်း
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၂
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်မှ သူ၏အဖွဲ့ဝင် နောက်လိုက်များအား ဝါရှင်တန်ဒီစီ၌ တရားဟောပြောနေစဉ်
ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကြားဖူးချင်မှ ကြားဖူးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အအဟ်မဒ်ကတော့ ကပ္ပီတဲလ်တောင်ကုန်းက ဧည့်ခွဲပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်အသရေနဲ့ အဆင့်မြင့် ထိပ်တန်းစွမ်းအားအချို့
(serious star power) ကို ဆွဲဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
The U.S. House of Representatives လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာ လူနည်းစုပါတီများ ကိုယ်စားတက်ရောက်ရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဝေးက ဒီမိုကရက်တစ်ခေါင်းဆောင် နန်ဆီပီလို ဆီ နဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်ဖြစ်တဲ့ ဆန်.ဂျွန်ကော်နင်တို့သာမက အခြားသော ဥပဒေပြု အရာရှိအများ အပြား တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က လန်ဒန်ကနေ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ လက်ရောက် ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင် အဟ်မဒ်ကို တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ အစ္စလာမ်မစ်အုပ်စုတွေ အာဏာရလာပြီး ကုရ်အာန်ကို အသုံးပြုနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ကိစ္စ စတာတွေကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အစ္စလာမ်နဲ့ ပတ်သတ် တဲ့အမြင်များကို (အကောင်းဘက်ကနေ) ခက်ခက်ခဲခဲရှုမြင်နေရတဲ့ အချိန်မှာ အဟ်မဒ်ကတော့ နှစ်ဘက်စလုံးကို ဖျောင်းဖျပြောဆိုသွားခဲ့ရာမှာ သူ့အတွက် အခက်အခဲဆိုတာမျိုး မတွေ့ရပါ။ ကပ္ပတီတဲတောင်ကုန်းမှာ သူပြောသွားခဲ့သလိုပါပဲ၊ သူ့မှာ "အားလုံးအပေါ်မေတ္တာထား၊ မည်သူ့ကိုမှ အမုန်းမပွား" ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။
ပန်ဆီလ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်၊ ဆန်.ရောဘတ် ကေဆီရဲ့ အဟ်မဒ်နဲ့ ပတ်သတ် ပြီး မိတ်ဆက်စကားပြောစဉ် သူ့သဘောထားကို ဖော်ပြခဲ့ရာမှာ "(ဘာသာတရား အချင်း ချင်း) သည်းခံမှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင်မှု" တွေမှာ သူ(အဟ်မဒ်)ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ချီးကျူးထောမနာသွားခဲ့ပါတယ်။
အဟ်မဒ်ကတော့ အစ္စလာမ်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး စုပေါင်းလက်တွဲပြီး ရှုမြင်သုံးသပ်ကြဖို့ဆိုတာ ထက် ပိုပါတယ်။ အသက် ၆၁နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်ကတော့ မိမိရဲ့ အနောက်နိုင်ငံများအပေါ် ထားရှိတဲ့မိတ်သင်္ဂဟဖြစ်မှု သဘောထား များနဲ့ အခြားမွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေကို ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အမြင့်ဆုံး မဟာမိတ်အဆင့်ကို ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ ကမ္ဘာ့အခြား နေရာတွေမှာ အသက်အန္တရာယ်အထိ ရန်လိုခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။
တခြားမွတ်စလင်မ်တွေနဲ့ မတူတာက အဟ်မဒီတွေဟာ ၁၉ ရာစုလောက်က သူတို့အဖွဲ့ကို စတင် တည်ထောင်သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူဟာ ဒုတိယမ္ပိပြန်လာဖို့ရှိတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြတာပါပဲ။
စွန္နီနဲ့ ရှီယိုက်တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက်အရတော့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေကို မွတ်စလင်မ်အစစ်အမှန် အဖြစ် မယူဆကြပါ။ အီဂျစ်မှာတော့ အဟ်မဒီဆိုရင် သာသနာအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုနဲ့ တရားဆွဲ ဆိုနိုင်သလို၊ ဆော်ဒီကတော့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ကတော့ ဥပဒေထုတ်ပြန်ကာ အဟ်မဒီတွေ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်ကြောင်း ပြဌာန်းကြေညာထားပါတယ်။
ဝါရှင်တန်နဲ့ ဘော်ဒါချင်းကပ်နေတဲ့ ဆီးဗားလ်စပရင်း၊ မေရီလန့်ဒ်က ဗလီတစ်လုံးရဲ့ အတွင်းမှာ တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့မှာ ပူပြင်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုကာ လူထူအုပ်စုကြီးက ငြိမ်သက်စိတ်ငြိမ်၊ သည်းခံစွာ ထိုင်လျက်စောင့်စားနေကြပါတယ်။ ပူးပြင်းသွေ့ခြောက်မှုက အရာ မထင်ဘဲ အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေရတာကို သူတို့က ပျော်ရွှင်နေကြပုံပါ။ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက် ဘာသာတရားရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးကလေးတစ်ခုကို စောင့်စားနေကြတာပါ။
နိုင်ငံတကာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်က တော့ အဖွဲ့ရဲ့ ပဉ္စမြောက်ခလီဖာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ကတော့ အဖွဲ့ဝင်မီလီယံပေါင်း မြောက်မြား စွာ ရှိတယ်လို့ဆိုပေမယ့် တခြားကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ မီလီယံအနည်းငယ်သာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ အမှန်တကယ်အရည်အတွက်နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ အဟ်မဒ်နဲ့ သူ့နောက်လိုက် များက အဖွဲ့ဝင်တစ်ဘီလီယံလောက်သာရှိတဲ့ အဖွဲ့ငယ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးဗားလ်စပရင်းဗလီမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာ အဟ်မဒ်က "အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ အတွက်တော့ ဒီအချိန်ဟာ အစ္စလာမ့်ပုံရိပ်အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ပါ" လို့ ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။ "ကျွန်တော်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်း အမြဲတင်ပြနေမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်တင်ပြချက်မဟုတ်သလို ဖန်တီးထားတဲ့ သွန်သင်ချက်အသစ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က ကျွန်တော်ရရှိစုဆောင်းထားတဲ့ အစစ်အမှန်သွန်သင်ချက်ပါ" လို့ အဟ်မဒ်က ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို ဂရုဓမ္မပြုပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ၊ အဟ်စနုလ္လာဟ် ဇဖရ် က ဂျီဟဒ်ဆိုတာ မိမိကိုယ်ပိုင် ဝိညာဉ်ရေးရာမကောင်းမှုများကို ဆန့်ကျင်ကြိုးပမ်းခြင်းသာ ဖြစ်တယ်၊ ဝိညာဉ် ရေးရာ ပုဂ္ဂလတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းဖို့ ကြိုးပမ်းခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျီဟဒ်ဆိုတဲ့စကား လုံးကိုတော့ လူးလွန့် ကြိုးပမ်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် စစ်ပွဲလို့ မကြာခဏ ဘာသာပြန်ဆိုတတ်ကြပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ ဒီအကြောင်းကို တော်တော်များများပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းထက် သာပြီးအရေးကြီးတာက မိမိတို့ကိုယ်ကို လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ကျင့်ကြံ သွားမလဲဆိုတာပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကနေ ဘာမှဖြစ်လာမှာမှမဟုတ်ဘဲ။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းတွေနဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးဆိုင်ရာ နည်းနာတွေကသာ တခြားအဆင့်မြင့် နေရာတစ်ခုကို ဦးဆောင်ပေးသွားနိုင်တာပါ။" လို့ ဇဖရ်ကို ဆိုပါတယ်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းသာလျှင် မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ်အားဖြင့် (ယေရှုခရစ်) ဒုတိယမ္ပိပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြတာပါ။ အဖွဲ့ကို ၁၈၈၉ မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ်ဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်အဖျက်အဆီးတွေ အရမ်းကို များပြားနေတဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၊ အစ္စလာမ့်ရေးရာ သင်ကြားရေးဌာနရဲ့ ဌာနမှူး အက္ကဘဲရ်အဟ်မဒ်က ဆိုပါတယ်။
"အိန္ဒိယမှာ မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ်က သူ့ဆီမှာ အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး (မူရင်းအစစ်အမှန်အတိုင်း) ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ သတင်းစကားရှိတယ်လို့ ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်ရလာခဲ့ ပြီး ဒါဟာ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ သစ်လွင်သောအစ္စလာမ့်သာသနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။" လို့ အက္ကဘဲရ်အဟ်မဒ်က ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အဟ်မဒီများဟာ ပါကစ္စတန်မှာတော့ ပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ အထူးထင်ရှားကျော်စောသူတွေဖြစ် တယ်လို့လည်း အက္ကဘဲရ်အဟ်မဒ်က သုံးသပ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့ ပါကစ္စတန်က နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျမာအသ္သီ အစ္စလာမ်မီက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ့်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိရိုးဖလာအမြင်ဘက် စတင်တွန်းပို့ ခဲ့တာကြောင့် အဟ်မဒီတွေကိုလည်း (သူတို့ကိုယ်ပိုင် အစ္စလာမ့်အဝန်းအဝိုင်း အပြင်ဘက်) လွှင့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျမာအသ္သီအစ္စလာမ်မီက အဟ်မဒီတွေဟာ တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ခြင်းဆို တဲ့ အစ္စလာမ့်သော့ချက်ဓမ္မကို အယုံအကြည်မရှိသူများဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ဒါက​တော့ အဟ်မဒီတွေအတွက် ထင်ရှားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကို အငြင်းခံလိုက်ရတာမျိုးပါ။ အဟ်မဒီတွေက တမန်တော်အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တမျိုးက ဥပဒေပြုကျမ်းစာရ တမန်တော်ပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သတင်းစကားကို သယ်ဆောင်လာပေမယ့် ဥပဒေအသစ် တင်ပြတဲ့ ကျမ်းစာကို ဆောင်ယူမလာတဲ့ တမန်တော်ပါ။" ဟု အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အက္ကဘဲရ် အဟ်မဒ်က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ အခြေအနေတွေဆိုးဝါးလာခဲ့တော့ အဟ်မဒီတော်တော်များများဟာ နိုင်ငံကို စွန့်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။ တချို့ကတော့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပါ။ အခုအချိန်မှာ တော့ ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန်၊ ဂါနာ၊ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန်တို့မှာ အဟ်မဒီအများအပြား နေထိုင်ကြပြီး အဟ်မဒီဦးရေပေါင်း မီလီယံပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဟ်မဒီတွေအတွက် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကတော့ ဆက်လက်ရှိနေဆဲပါ။
၂၀၁၀တုန်းက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လာဟိုရ်မြို့က အဟ်မဒီဗလီနှစ်လုံးမှာ လူဦးရေ ၁၀၀ လောက်ဟာ အေကေ ၄၇ နဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတွေကိုင်ထားတဲ့ တိုက်ခိုက်သူတွေကြောင့် သေပွဲဝင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က၊ အမေရိကန်အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ သာသနာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစီရင်ခံစာမှာတော့ အဟ်မဒီများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာ ရှေ့တန်းအချက်အချာက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
"ပါကစ္စတန်မှ ဘာသာရေးအဖွဲ့ငယ်များ၌ အဟ်မဒီများသည် တရားဝင်ဥပဒေအရ အပြင်းထန်ဆုံး ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုခံနေရသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး တရားဝင် ပိတ်ဆို့ခွဲခြားခြင်းလည်း ခံထားရသည်။" ဟု အစီရင်ခံစာက တင်ပြပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာကပဲ အင်ဒိုနီးရှားက အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများအကြောင်းလည်းတင်ပြထားပြီး အဟ်မဒီဗလီပေါင်း အနည်းဆုံး ၅၀ ဟာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အနှံ့က အဟ်မဒီများကို ခက်ထန်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် အမေရိကန်နေ အဟ်မဒီများဟာ မိမိတို့ဘ၀အတွက် နက်ရှိုင်းတဲ့ (အမေရိကန်၏ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို) တန်ဖိုးထားမှုမျိုး ရှိနေပါတယ်။
"အမေရိကမှာတော့ ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့ကလေးတွေ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ သူတို့က အမေရိကမှာ ရှိနေရတာကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ရာနှိုင်းပြည့်မွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်သလို ရာနှုန်းပြည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။" လို့ အက္ကဘဲရ် အဟ်မဒ်က ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဟဲရစ္စဘတ်၊ ပန်ဆီလ်ဗေးနီးယားမှာ အဟ်မဒီများရဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင် အဟ်မဒ် ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန်အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာ တက်ရောက် သူပေါင်း ၁ သောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော် ဘယ်နေရာပဲသွားသွား၊ ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော့်အဖွင့်ဝင်များနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်။" လို့ အဟ်မဒ်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ(အဟ်မဒ်)က အမေရိကကို နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ပြီးကတည်းက အမေရိကန် မွတ်စလင်မ်များရဲ့ စိစစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရေးရာ၊ အမေးအဖြေတွေဆွေးနွေးဖို့ အဟ်မဒီတွေအတွက်ကတော့ အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က နယူးရောက်မြို့ ကွန်ဂရက်ရဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ် ပီတာကင်းဦးဆောင်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း မွတ်စလင်မ်များရဲ့ အခြေခံအချက်အလက်များအပေါ် ကွန်ဂရက်ဆိုင်ရာ ကြားနာခြင်းကို ဖိအားပေးသွားဖို့အတွက် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အများအပြားဟာ ထောက်ခံခဲ့ကြပါ တယ်။ တခြားမွတ်စလင်မ်အုပ်စုတွေကတော့ ဒီလုပ်ရပ်ကို အန္တီမွတ်စလင်မ်လုပ်ရပ်လို့ ရှုမြင်ခဲ့ ကြတာပါ။
"ဒီကွန်ဂရက်ကြားနာမှုက နိုင်ငံတွင်းလုံခြုံရေးကို တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မယ်၊ အစ္စလာမ်သာသနာကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ အစိုးရကသုံးသပ်ရင် ကျွန်တော်ဘက်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ အာမခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပိုပြီးလုံခြုံတဲ့ အမေရိကကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။" လို့ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်၊ အယ်ဒီတာထံပေးစာကဏ္ဍမှာ အဟ်မဒီလူငယ်များအစီအစဉ်၊ အမေရိကန်ရဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ (ဒေါက်တာ) ကာဆိဖ် အင်.ချောင်ဒရီက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ချောင်ဒရီကတော့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်တွေထဲက (ဒီအကြောင်းကို) ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ တစ်ဦး တည်းသော (အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်) ပါ။
"ခင်ဗျားအနေနဲ့ အခြားလူထုနဲ့အတူ ရှိနေရပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို ဒီလို စကားပြောခန်းတွေ၊ ဆွေးနွေးခန်းတွေမှာ ချပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှလည်း သစ်လွင်တဲ့အချင်းအရာ တွေ ဖြစ်ထွန်းလာမှာပါ။ ဒါက မျိုးစေ့ကြဲပြီး ရေလောင်းတဲ့သဘောပါ။ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းချင်ရင် တော့ ခင်ဗျားမှာရေနဲ့မျိုးစေ့ လိုအပ်မှာပေါ့။ " ဟု အမေရိကန်အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌ ဇဖရ်က ဆိုပါတယ်။
"အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေ ပြည်သူများနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းဖို့ရာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကနေ ဘယ်လိုဖူးပွင့်လာမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှု ရမှာပါ" လို့ သူက ဖြည့်စွက်ပြောကြားပါတယ်။
အဟ်မဒီများနဲ့ အခြားမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုကွဲပြားသလဲဆိုတာက အဟ်မဒီခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ အစွန်းရောက်များနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုထင်ထင်ရှားရှား (မှတ်ချက်ပြု) တယ်ဆိုတာ ပေါ်မှာလည်း တည်မှီနေပါတယ်။
"ယနေ့ကာလမှာတော့ အစ္စလာမ်က ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီလို အစ္စလာမ့် အစစ်အမှန်သွန်သင်ချက်ကို လိုက်နာနေတာမဟုတ်တဲ့ မိမိတို့ကိုယ်ကို မွတ်စလင်မ်တွေပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ (အမည်ခံ) အုပ်စုများကြောင့်ပါပဲ။ ဒီလိုလူများက (တင်ပြပြောဆိုနေတဲ့) မွတ်စလင့်ပင်မအရင်းအမြစ်ဆိုတာမျိုးကသာ အစ္စလာမ်လို့ ဆိုရင်တော့၊ အစ္စလာမ်ကို ဖြန့်ချိဖို့ အခွင့်အလမ်းတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ " လို့ ဇဖရ်က သူထင်မြင်တဲ့ အခြေခံဝါဒီမွတ်စလင်မ်များအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ စည်းအပြင်က လူတွေကို အမည်ခံမွတ်စလင်မ်လို့ သုံးစွဲလိုက်တာ ကြောင့် အဟ်မဒီများအား တခြားမွတ်စလင်မ်တွေက ခင်မင်နှစ်လိုကြတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ စွန္နီနဲ့ ရှီးယိုက်မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်အုပ်စုတွေကတော့ အဟ်မဒီတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စကားလေးတောင် ဟဖို့ ဆန္ဒရှိမနေကြပါဘူး။
စီအင်အင်သတင်းဌာနက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အဓိကအစ္စလာမ်အဖွဲ့ကြီးများဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်-အစ္စလာမစ် အဆက်အဆံကောင်စီနဲ့ မြောက်အမေရိက အစ္စလာမ်မစ် အဖွဲ့အစည်း တို့ကို (အဟ်မဒီများနဲ့ပတ်သတ်လို့) ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ နှစ်ဖွဲ့စလုံးက မှတ်ချက်ကလေး ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာတောင် တုန့်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။
အမေရိကန်ရဲ့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်ဇဖရ်ကတော့ သူ့အုပ်စုဟာ တိုးတက်လာဖို့ မြင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဟ်မဒီအုပ်စုမှာ မီဒီယာအဖွဲ့ရှိပြီး မွတ်စလင်မ် တယ်လီဗွီးရှင်း အဟ်မဒီယာလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ၂၄နာရီ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ချယ်နယ်လ်လည်းရှိပါတယ်။
ချယ်နယ်လ်ရဲ့ ကနဦးရည်ရွယ်ချက်က ခလီဖာရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကို ထုတ်လွှင့်ဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခြား အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ဆီလ်ဗားစပရင်းဗလီ ဘေးမှာတော့ ဂြိုဟ်တုစလောင်းအကြီးကြီးတွေဝန်းရံနေပြီး အဲဒီကနေတဆင့် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကို ရုပ်မြင်သံကြားလှိုင်းတွေ ဖြန့်ဝေနေတာပါ။
ဒီ အမ်တီအေရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်အပြင် အဟ်မဒီတွေဟာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတကာပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေး (Islam International Publications) ကိုလည်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ​ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အကောင်အထည်ဖော်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
အဟ်မဒီအများစုကတော့ မီဒီယာမှာ ဖော်ပြနေတဲ့ အစ္စလာမ်ရဲ့ ပုံပျက်ပန်းပျက်အသွင်အပြင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်သောကထားရှိကြပါတယ်။ သူတို့က အဲဒီမီဒီယာတွေကို အခြေခံဝါဒီမွတ်စလင်မ် တွေကိုသာ အထူးအာရုံထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင်တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေကို လုံလောက်တဲ့ အာရုံထားမှုမလုပ်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
"အခု အစ္စလာမ့်ပုံရိပ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် အမေရိကမှာ အဓိကစိန်ခေါ်မှုက ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ(သတင်းစာများ)မှာ အရမ်းကို ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ အစွန်းရောက်အပြုအမူ ပုံရိပ်တွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ပါပဲ။" ဟု ဇဖရ်ကို ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်တက္ကသိုလ်က အက္ကဘဲရ်အဟ်မဒ်ကတော့ အဟ်မဒီတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ အနောက်နိုင်ငံ များနဲ့ အစ္စလာမ်အကြား ပေါင်းကူးတံတားလို့ မြင်ပါတယ်။
" အမေရိကဘက်မှာ အဟ်မဒီများက အစ္စလာမ်အတွက် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ တံတားသဖွယ် ပြုမူနေကြပြီး ဒါကလည်း အမေရိကအတွက် လတ်တလောလိုအပ်နေတဲ့အချက်ပါ။ မွတ်စလင်မ်တွေ အတွက်ကတော့ ဒီ(အဟ်မဒီမဟုတ်တဲ့)မွတ်စလင်မ်အုပ်စုကြီးနဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေမယ်ဆိုရင်၊ ကမ္ဘာကြီးကို အစ္စလာမ်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးဖို့ (အတွက်ဆိုပေမယ့်) ကမ္ဘာကြီးကနေ သီးသီးသန့်သန့်နဲ့ အထီးကျန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် အလုပ်တွေသာ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခွင့်ပဲ ရှိမှာပါ။ " လို့ အက္ကဘဲရ်အဟ်မဒ်က ဆိုပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များဟာ ကမ္ဘာနှစ်ခုကြားက ပိတ်မိနေတဲ့အုပ်စုပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်မှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟောပြောတင်ပြ
ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၂
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်များ၏ ဥသျှောင်မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်၊ စနေနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟဲရစ္စဘတ် တွင်ကျင်းပသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် အမျိုးသမီး ၅ထောင်ကျော်အား မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းတွင် အမျိုးသမီးများအား မိမိတို့၏လူနေမှု ဘ၀ ပုံစံ၌ သင့်တင့်မျှတသိမ်မွေ့မှုရှိရန်၊ ကလေးသူငယ်များအား ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုပေးရန် နှင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားထားသည်။
လန်ဒန်မြို့မှ ရောက်ရှိလာသည့် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် သခင်ကြီးမီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်မှ အမျိုးသမီးများအား သီးသန့်ခန်းမဆောင်တွင် မိန့်ခွန်းဟောပြောတင်ပြနေစဉ်တွင် အမျိုးသားများဘက်မှ တီဗွီရုပ်မြင်သံကြားဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေပုံ။ (Photo Courtesy - PAUL CHAPLIN, The Patriot-News)
သခင်ကြီး မီရ်ဇာမဆ်ရူးအဟ်မဒ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေအများဆုံး အစ္စလာမ်သာသနာအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု၏ အစ္စလာမ့်ခလီဖာသို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ သခင်ကြီးက အမျိုးသမီးများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားအပြီးတွင် အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ်များ၏ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Farm Show Complex တွင်ကျင်းပသည့် ၆၄ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ၌ တက်ရောက်လာကြသော အမျိုး သားဦးရေ ၇ ထောင်ခန့်ကိုလည်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုညီလာခံကို သောကြာနေ့က စတင်ခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ့်ခလီဖာမှ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း၏ အရေးပါပုံကို အဓိကထားပြောကြားခဲ့ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ဆန့်ကျင်သည့် မကောင်းမှုပေါက်ပွားစေနိုင်သော မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုမဆို အမျိုးသမီးများအား သက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်းဖြင့် သတိပေးပြောကြားခဲ့ သည်။
သခင်ကြီးက "ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုက သက်ဝင်ယုံကြည်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါပဲ၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခြုံလွှာတွေ နဲ့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကတော့ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။" ဟု မြွက်ကြားခဲ့သည်။
မူရင်းသတင်း - http://goo.gl/cs8MP
ဓာတ်ပုံများကြည့်ရန် - http://goo.gl/6yFuj
ပါကစ္စတန်၊ ကရာချိ : အိုရန်ဂီမြို့ အဟ်မဒီမွတ်စလင်မ...
၆၅နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့နှင့် မြန်မာပြည်ရှိ အဟ်မဒီမ...
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်၊ အ...
အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားများအတွက် ဖျောင်းဖျပြောဆိုန...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်မှ ယဉ်ကျေးသိ...